Congolese Rumba Music Inopinda muUNESCO Heritage List
Location: musha » Kutumira » tsika nemagariro » Congolese Rumba Music Inopinda muUNESCO Heritage List
Mumhanzi weRumba wemuAfrica unotungamira muAfrica wave pachirongwa chenhaka yepasi rose chevanhu mushure mekunge United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) yabvuma kuti mimhanzi iyi izivikanwe pasi rose.
Sangano reUnited Nations rinoona nezvetsika, dzidzo, uye sainzi UNESCO yakawedzera mutambo weRumba weCongo kune runyorwa rwayo rwenhaka yetsika isingabatike.
Kumira mimhanzi inotungamira muAfrica, iyo Congolese Rumba yakapfuma netsika dzeAfrica, nhaka, uye hunhu; zvese zvichitaura nezve Africa.
Mumusangano waro wekupedzisira wekuongorora zvikumbiro makumi matanhatu, Komiti yeUNESCO yakange yazivisa kuti rumba yeCongo yakagamuchirwa parondedzero yayo yenhaka isingabatike nehunhu mushure mekukumbira kweDemocratic Republic of Congo (DRC) neCongo Brazzaville.
Mimhanzi yeRumba inotora mavambo ayo muumambo hwekare hweKongo, uko mumwe aiita kutamba kunonzi Nkumba. Yakanga yawana nhaka yayo nekuda kweruzha rwayo rwakasiyana runonyonganisa ngoma yevaAfrica vakaiswa muuranda nenziyo dzevaSpanish colonizer.
Mimhanzi inomiririra chikamu chekuzivikanwa kwevanhu veCongo uye diaspora yavo.
Munguva yekutengeswa kwevaranda, vaAfrica vakaunza tsika dzavo nemimhanzi kuUnited States of America neAmerica. Vakagadzira zviridzwa zvavo, zvechinyakare pakutanga, zvine hungwaru gare gare, kubereka jazz neRumba.
Rumba mushanduro yayo yemazuva ano ine zana remakore rakabva pa polyrhythms, ngoma, uye percussion, gitare nemabhesi, zvese zvichiunza pamwechete tsika nemagariro, shuwa, uye kugovana mafaro.
Mumhanzi weRumba unoratidzwa nenhoroondo yezvematongerwo enyika yevanhu veCongo vasati vawana rusununguko uye mushure mekusununguka, ndokuzozivikanwa muAfrica yose kumaodzanyemba kweSahara.
Mhiri kweDemocratic Republic of Congo neCongo Brazzaville, Rumba inogara munzvimbo ine mukurumbira mukondinendi yese yeAfrica kuburikidza nemagariro, zvematongerwo enyika, uye tsika nhaka inotangira rusununguko rwenyika dzemuAfrica.
Democratic Republic of Congo neCongo Republic dzakanga dzaendesa chikumbiro chakabatana chekuti rumba yadzo iwane chinzvimbo chenhaka nekuda kweruzha rwayo rwakasiyana rwunosanganisa madhirama evaAfrica vakaitwa nhapwa nenziyo dzevapambi vekuSpain.
UNESCO yakawedzera mimhanzi yeCongo Rumba kune yayo yepasirese nhaka runyorwa. Nyika dzeDemocratic Republic of Congo neCongo Republic dzakanga dzaendesa pamwe chete gwaro rekuti Rumba yadzo iwane chinzvimbo cheWorld Heritage, izvo zvakafadza vanhu vekuDemocratic Republic of Congo neCongo-Brazzaville.
"Rumba inoshandiswa kupemberera nekuchema, munzvimbo dzakavanzika, dzeveruzhinji uye dzechitendero," akadaro UNESCO citation. Kuchitsanangura sechinhu chakakosha uye chinomiririra chikamu chekuzivikanwa kwevanhu veCongo uye diaspora yavo.
Hofisi yeMutungamiriri weDemocratic Republic of Congo, Felix Tshisekedi, yakataura mune tweet kuti "Mutungamiriri weRepublic anotambira nemufaro uye nerudado kuwedzerwa kweCongo Rumba parunyorwa rwenhaka."
Vanhu veDRC neCongo-Brazzaville vakati kutamba kweRumba kunoramba kuripo uye vanotarisira kuti kuwedzera kwayo pane rondedzero yeUNESCO kuchaipa mukurumbira kunyangwe pakati pevanhu vekuCongo neAfrica.
Mimhanzi yeRumba yakaratidzwa nenhoroondo yezvematongerwo enyika yeCongo isati yawana uye mushure mekusununguka uye ikozvino iripo munzvimbo dzese dzehupenyu hwenyika, Andre Yoka Lye, director weDRC National Art Institute muguta guru reKinshasa akadaro.
Mimhanzi iyi inokwevera pakushuvira, kuchinjana kwetsika, kuramba, kusimba, uye kugoverana kwemafaro kuburikidza nekodhi yavo yemapfekero, akadaro.
Africa Komiti Kinshasa mumhanzi UNESCO nyika dzakabatana
Sachigaro Dr. Walter Mzembi ndivo Tariro Itsva yeAfrican Tourism
UNDP Inofema Hupenyu Hutsva Kushanya kweTanzania
Zvimedu zvepurasitiki zvinowanikwa muropa kekutanga
VekuAmerica vanoti rega kutenga mafuta negasi kubva kuRussia